यी हुन् आफ्नै कारणले पद्च्युत भएका मन्त्रीहरु, के थिए कमजोरी ? | mulkhabar.com
यी हुन् आफ्नै कारणले पद्च्युत भएका मन्त्रीहरु, के थिए कमजोरी ?
July 25, 2018 | 6:29 am 101 Hits
आफैंले दिएका विवादीत अभिव्यक्ति र गरेको विवादित गतिविधिका कारण नेपालमा पनि कही मन्त्रीहरुले आफ्नो पदबाट हात धुनुपरेको छ । यस्तै आफ्रनै कारणले छोटै अवधिमा पदच्युत हुन पुगेका मन्त्री मध्ये पछिल्लो मन्त्री बनेका छन् कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामांग ।
तामांगले नेपाली चेलीहरुले बंगलादेशमा एमविविएसको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न आफ्नो शरीर बेच्ने गरेको भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तिव्र विरोध भयो र उनले सार्वजनीक रुपमा माफी माग तर उनको अलोचना रोकिएन र अन्तत उनले मंगलबार राजीनामा नै गरे ।
दुइतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिने तामांग पहिलो मन्त्री बने । उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेपछि उनको पक्षमा फेरी सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रंगिएका छन् ।
यस अघि यस्तै विवादित अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण हालसम्म पुर्व मन्त्रीहरु हरी पराजुली, राधा ज्ञवाली, मातृका यादव, शरदसिंह भण्डारी, दिलानाथ गिरीले पनि आफ्नो मन्त्री पद गुमाएका थिए ।
हेर्नुहोस कसले कस्तो कारणले आफ्नो पद गुमाएका थिए ?
अत्यन्त विवादास्पद छविका ल्यारक्याल लामाको पद खोसिनुको पछाडि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको थियो । दरबारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट वैंकको राखेको लकरमा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले १४ थान गोली फेला पार्नुका साथै उनको दोहोरो नागरिकता भएको समेत खुल्न आएको थियो । झलनाथ खलानको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अर्थराज्य मन्त्री रहेका लामाको चीनको समेत नागरिकता रहेको सार्वजनिक भएको थियो ।
तत्कालिन एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली उर्जामन्त्री थिइन् । मन्त्री पदमा रहँदा सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले अख्तियारको आग्रहमा उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
एक सय ३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेक्क प्रक्रिया पुरा नगरी अनियमितता गरेको आरोपमा ज्ञवालीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ असोज ०७२ मा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । ज्ञवाली हाल प्रतिनिधिसभाकी सांसद छिन् ।
कृषिमन्त्री हरि पराजुली १५ असार ०७२ मा काठमाडौंको मुलपानीमा धान दिवसका अवसरमा रोपाई गर्न जाने क्रममा महिलासँग अश्लिल व्यवहार गर्दै गरेको भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पद त्याग्न बाध्य भएका थिए ।
पराजुलीले आफ्नो सार्वजनिक छवि जोगाउन नसकेको भन्दै निकै आलोचनाको सिकार हुँदै आएका थिए । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खैनी माडेर सेवन गर्दै थुकेको कुराले पनि उनलाई निकै विवादास्पद बनाएको थियो ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले)बाट मन्त्री भएका उनी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए । आफूले अश्लिल व्यवहार नगरेको भन्दै प्रष्टीकरण दिँदा दिँदै पनि प्रधानमन्त्री रहेका कोइरालाले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाबाट सहरी विकासमन्त्री मन्त्री बनेका थिए दिलनाथ गिरी । सोही सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका आफ्ना पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँग मनमुटाव बढेर गयो । मन्त्रिपरिषद बैठकमै थापाले गिरीलाई एक्कासी मन्त्री पदबाट राजीनामाको माग गरे । राजीनामा नदिएपछि उनलाई ‘मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने’ आशयको पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई थापाले बुझाए । सोही पत्रका आधारमा १४ पुस ०७४ का दिन गिरी मन्त्री पदबाट मुक्त भए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई क्याविनेटमा रक्षामन्त्री थिए शरतसिंह भण्डारी । उनले मन्त्रीपदमा रहँदा तराई/मधेसका २२ जिल्लाका जनताले निर्णय गरे विभाजित हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएकै कारण आफ्नो पद गुमाउनु पर्‍यो । ‘तराई नेपालबाट छुट्टिन कसले रोक्छ ?’ भनि प्रश्नात्मक शैलीमा दिएको अभिव्यक्ति उनलार्इ निकै महंगो सावित भयो । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता भण्डारीले १ असोज ०६८ मा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्ति निकै समयसम्म विवादित बनेपछि उनले अन्ततः २ कात्तिक ०६८ मा राजिनामा दिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट बनमन्त्री बनेका मातृका यादवले वातावरण विनाश गरी अवैधरुपमा ढुंगाखानी सञ्चालन हुँदा समेत कारबाही नगरेको भन्दै ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलाई मन्त्रालयको शौचालयमा थुनेका थिए ।
स्थानिय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुनेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बीच विवाद चर्कदै गएपछि प्रचण्डले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए । हाल उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।